Semalt Explais Nzira Yokudzivirira Sei Pop-ups PaGoogle Chrome
Kudzidza nzira dzekuvhara mahwindo ep-up paGoogle Chrome iri nyore kwazvo. Izvo zvinovharidzirwa zvinogara zvichisipo, asi munhu anogona kusimbisa kana iri kushanda mumapurani akapfuura. Kana iwe uchiramba uchingogamuchira pop-ups, pane sarudzo yekuisa shanho rekuchengetedza chikwata chekuvhara ma-pop-ups kubva pane zvakavakwa mumushambadziri wemareta. Kana iyo pop-ups ichienderera mberi, ipapo pane mikana yakawanda iyo kombiyuta yako yakave yakashungurudzwa ye-pop-up malware. Kuongorora uye kuchenesa kombiyuta yenyu ndiyo nzira chete yekurasikirwa nayo - free logo design company name.
Lisa Mitchell, iyo Semalt Mutengi weMuteresi Achibudirira, anopa nzira dzinotevera dzekuvhara vanhu vari kuGoogle Chrome:
Method 1: Kugadzirisa Chrome Zvirongwa pane Mobile Device:
Pamwe paIndaneti kana iOS, vhura Google Chrome application;
Pamusoro pekona yekurudyi, chengetera pamatatu matatu;
Sarudza Zvirongwa. Iko inofanira kukutaurira kune urongwa hwekutsvaga kwekutsvaga;
Mune madivayiri eAroid, sarudza 'Site Settings,' ichakuendesa kune mamwe mazvigadziro ezvehuwandu. Nokuda kweIOS, iyi sarudzo inonzi 'Zvigadziriswa Zvirongwa.'
Pasi pe "Pop-ups" tab, slide ichaonekwa ichikuita kuti ushandise blocker yeGoogle Chrome pop-up.
Simudza slide kuti ugadzirise zvirongwa zvep-up nenzira yaunoda. Apo slide iri kuenda kuruboshwe uye inoratidza girazi, zvinoreva kuti pop-up blocker iri kushanda. Kana iine bhuruu, inoratidza kuti pop-up blocker iripo. Kusiyana ndeyechokwadi kune avo vanoshandisa iOS. Chiratidzo chebhuruu chinoratidza kuti blocker iri pamusoro uye ichine grey kuti iri kure.
Method 2: Kugadzirisa Chrome Zvirongwa paKomutori:
Vhura purogiramu yeGoogle Chrome pane chero yebasa rekushanda ye desktop, iyo inosanganisira Windows, Chromebook, kana Mac OS.A Chromebook ine nzvimbo yako yebasa kana chikoro inogona kukudzivisa kushandura pop- zvigadziridza pamusoro pezvigadzirwa izvi.
Bhokisi remenyu riri kumusoro kwepamusoro kwekombiki uye rinoratidza madota matatu akafanana;
Tsvaga pasi pasi menyu ekuderedza uye sarudza bhokisi rekugadzirisa. Iyo inokudzosera kune imwe itsva tab ine Chrome Settings menu;
Pasi pepaji pane bhatani re "Ratidza Zvidzidzo Zvakare". Tsvairai uye teererai;
Muchikamu cheUndaneti chekugadzirisa tab, chengetera pa 'Zvigadziro Zvitemo.' Inovhura firati itsva yezvirongwa;
Pasi pemusoro we "Pop-ups", sarudza kusabvumira nzvimbo kuti dziratidze ma-pop-ups (anofanirwa);
Dhinda Done. Inovhara hwindo uye inochengetedza zvirongwa zvitsva. A zivo iri kurudyi rwebhari yekutsvaga inoita sewindo rebhundaneti ne X iri chiziviso chokuti Chrome yakavhara pop-up.
Imwe nzira yekubvumira kuti vanhu vaite purogiramu ndeyekunyanya paikoni ichi uye kusarudza kubvumira vhesi-vhesi panzvimbo ino yauripo.
Method 3: Kuisa Adblocker:
Vhura Google Chrome. Dhiyabhorosi version ye browser haifaniri kuwedzera zvinoda. Nekushandisa mafoni, munhu anofanira kunge ane software yakasiyana-siyana yekudzivirira uye pafoni yakadzika midzi;
Vhura tab yeGoogle Chrome tab;
Kuruboshwe rworuboshwe, chengeta pa 'Extensions' iyo inozarura runyora rwezvinhu zvose zvakanyanyoiswa mu Chrome;
Sarudza 'Itai Zvakawedzerwa Zvimwe.'
Mundima yekuwedzera, tsvaga kuwedzera kweAdblock. Yakawanda ndeyeAdblock, Adblock Plus, kana Ublock. Manually whitelist websites kana adblocker ichivhara zvatinoda hazvidi kuti zvidzivirire;
Wedzera ku Chrome. Izvo sarudzo inowanikwa kune kodzero yekuwedzera. Chrome ndiye inowedzera kuwedzera;